Archive du 20170418
Fitondrana HVM Tsy misy ilana azy intsony
Tsy tongatonga ho azy ny nisamborana an-dRtoa Claudine Razaimamonjy fa tsy maintsy nisy ny hery ambadika manohana sy mandrisika ny Bianco sy ny Sendikan�ny Mpitsara (SMM),
Ravalomanana tany Morondava Nanentana ny olona handray andraikitra
Efa tena henjana ny asan-jiolahy sy ny tsy fandriampahalemana any amin�ny faritra Menabe.
Fampandosirana an�i Claudine A&C Olona ambony maro tokony hosamborina
Olona ambony maro eto amin�ny firenena no ahiana ho tompon�antoka tamin�ny fampandosirana an�i Claudine Razaimamonjy.
Taratasin�i Jean Paska sandoka ?
Miarahaba Jean a ! Dia tena novetavetainareo mihitsy mantsy ny hasin�ny fety masin�olona a ? Inona mihitsy moa izany no tianareo ahatongavana e !
Raharaha Claudine Razaimamonjy Manambany ny rafi-pitsaboana Malagasy
Fantatry ny fitondrana ankehitriny, hoy ny filohan�ny fikambanana politika Asandratro ny tanindrazako, Andrianina Rajoharison, fa ahiana tsy ho lany intsony izy ireo amin�ny fifidianana.
Ambositra Mpiadina ho zandary roa maty
Andro ratsy tao amin�ny sekolin�ny zandarimaria Ambositra ny zoma 14 aprily 2017. Mpiadina ho zandary roalahy nindaosin�ny fahafatesana tamin�io andro io, rehefa niatrika adina taranja hazakazaka.
Lehilahy maty teny Besarety Efa rotidrotika ny tarehiny
Lehilahy iray hita faty teny Besarety omaly alatsinainy vao maraina. Potika tanteraka ny tarehiny ary niparitaka teo amin�ny toerana nahitana ny razana ny ra vokatry ny ratra mafy nahazo azy.
Vahoakan�Ambohimanarina Nitondra am-bavaka ireo sedra sy vokatra tsara niotazana
Niara-niombom-bavaka fisaorana an�Andriamanitra tao amin�ny Fiangonan�i Jesoa Kritsy eto Madagasikara Ambohimanandray Filadelifia ny sabotsy teo ny solombavambahoakan�i Madagasikara
Fanondranana olona mankany Koweit 9 mianadahy nampidirina am-ponja
Nalefa vonjimaika eny am-ponja ny sabotsy teo ireo olona sivy mianadahy tra-tehaka nanondrana olona an-tsokosoko hiasa any Koweit. Raha tsiahivina, lehilahy iray antsoina hoe
Ady amin�ny asan-jiolahy Nohamafisina ny fisavana scooter
Nanao hetsika manokana fisavana ireo moto tao Toamasina ny polisim-pirenena notarihan�ny tale iraisam-paritra ny kaomisera Rakototiana Laubel Valisoa.
Fieferana Avaradrano Fasana efatra no indray vaky
Taorian�ilay zazalahy kely nanjavona ary hita tao anaty lava-bato ny vatana mangatsiakany ny herinandro teo dia nitrangana vaky fasana indray ny faran�ny herinandro teo tany amin�ny kaominina Fieferana, distrikan�Avaradrano. Tsy fantatra mazava izay fotoana nitrangany.
Fetin�ny Paska Tomefy olona Antsirabe
Miha malaza sy mivoatra hatrany ny fetin�ny Paska tany Antsirabe ary miha mahasarika ny mpivahiny manodidina sy ny avy any ivelan�Antsirabe hatrany.
Ho rendrika ny sambo !
Vita iny ny fankalazana ny fetin�ny paska ary hitodika any amin�ny resaka politika indray ny mason�ny rehetra.
Ampanjaka eto Madagasikara Hanangana tranombakoka manerana ny nosy
Afa-po tamin�ny fampirantiana fampahafantarana ny kolontsaina sy ny vakoka Mahafaly ny herinandro lasa teo teny amin�ny tranombokim-pirenena Ampefiloha ny FCRTM (F�d�ration des Communaut�s Royales Traditionnelles de Madagascar).